အရေးပေါ် စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ( ၄ ) “ကိုမုန်တိုင်း”
အရေးပေါ် စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ( ၃ ) “အန္တရာယ်မကင်းသော လူနာ”
ရယ်မောခြင်း၏ အနာကျက်စေသည့် အစွမ်း
တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံးပြီးချိန်မှာ သင်တကယ် စိတ်ပါလက်ပါ ရယ်မောဖြစ်ခဲ့သလားဆိုတာကို ဆန်းစစ် ကြည့်လိုက်ပါ။ အားရပါးရ မရယ်ရ သေးရင် ရယ်လိုက်ပါ . . စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာလာပါလိမ့်မယ်။ – ရယ်တာကြောင့် ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်က ထုတ်ပေးတဲ့ အန်ဒိုဖင်ဟော်မုန်းတွေ အထွက်တိုးလာပြီး စိတ်...
မြန်မာလူမျိုးတို့ စားလေ့ရှိသော တညင်းသီး နှင့် ဆေးဘဲဥ ကောင်းကျိုး ၊ ဆိုးကျိုးများ
ဒေါက်တာ ၀င်းဝင်းမြင့်( အာဟာရ ဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်းကြီး) တညင်းသီး တညင်းသီးက စားသင့်တဲ့ အစာထဲမှာ မပါဝင်ပါဘူး။ တညင်းသီး တစ်လုံးစား ပြီး ကျောက်ကပ်ပျက်လို့ ရောက်လာတဲ့ လူနာတွေ အများကြီး တွေ့ရလို့ ပါ။ တညင်းသီးမှာ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့...
သင့်အိပ်မက်တွေ လက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင် . .
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ အိပ်မက်တွေက ဘယ်အခါကျမှ လက်တွေ့ ဖြစ်လာမှာလဲကွယ် . . ဆိုပြီး တွေးပူနေပြီလား၊ ကိုယ့်မှာ အိပ်မက်တွေရှိနေပြီ ဆိုရင် အဲဒီ အိပ်မက်တွေကို လက်တွေ့ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားလိုက်ပါ . . အိပ်မက်တွေက အကောင်အထည်...
၊ မိမိုး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ ၀မ်းမှန်မှန်သွားမှသာ တစ်နေ့လုံး နေထိုင်ကောင်းပြီး သက်သောင့်သက်သာ ရှိနေမှာပါ။ ဒါမှသာ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါတဲ့ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ဖီ ဘာကြောင့်လဲ – ကဖင်းဓာတ် ပါဝင်လို့ပါ။ ကော်ဖီမှာ ကဖင်းဓာတ်ပါဝင်မှု များတာကြောင့်...
နှာခေါင်း၏ ၀င်လေထွက်လေအရ သိရှိနိုင်သော ရောဂါဝေဒနာ ၅ ခု
ဇွန်ခိုင်ဦး ( ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အရင် ဘီစီ ၄၀၀ လောက်တုန်းက ရောဂါတွေ ကိုရှာဖွေဆန်းစစ်ရာမှာ နှာခေါင်းကနေ၀င်ထွက်တဲ့ လေတွေကို အကဲဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နှာခေါင်းရဲ့ ၀င်လေ၊ ထွက်လေအနံ့ဟာ တချို့ရောဂါဝေဒနာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ နှစ်ပေါင်းများ စွာကတည်းက ဆေးပညာရှင်တွေက ဆိုခဲ့ကြပါ...
ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်မှု မြင့်မားတဲ့ နံနက်စာ စားရအောင်
မိမိုး ( ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သင့်နံနက်စာမှာ ပရိုတင်းပါဝင်မှု ရှိရဲ့လား။ အ၀လွန်ရောဂါဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာဂျာနယ်ရဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ပရိုတင်းပါဝင်မှုများတဲ့ နံနက်စာစားတဲ့ သူတွေက ပရိုတင်းပါဝင်မှုနည်းတဲ့ နံနက်စာစားလေ့ရှိသူတွေထက် နေ့လယ်စာမှာ ကယ်လိုရီမှီဝဲမှု ၂၆ ရာခိုင်နှုန်း ပိုနည်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီအာဟာရဓာတ်တွေက အူကနေ...
သင့်မျက်ဝန်း သဘာဝကျကျ တောက်ပနေစေမည့် နည်းလမ်းကောင်းများ
၊ လရိပ်မေ ၊ လူအများစုဟာ အလုပ်တွေ အလွန်အမင်းလုပ်ရတာ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများတာနဲ့ အိပ်ရေးပျက်တာ စတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး မျက်ဝန်းတောက်ပမှု လျော့နည်းနေတတ် ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်မျက်ဝန်းတွေ သဘာဝကျကျ ကြည်လင်တောက်ပနေစေဖို့ အလွယ် နည်းတွေကို မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ –...
Page 459 of 492« First‹ Previous455456457458459460461462463Next ›Last »
၀က်ခြံလား၊ အနာစိမ်းလားဝက်ခြံလား၊ အနာစိမ်းလား
နှာစေးတာ မပျောက်လို့ပါ . . .
အိမ်ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျစေမည့် နည်းခြောက်သွယ်
ရာသီဥတု အပူအအေးအပြောင်းအလဲကြောင့် ခေါင်းကိုက်နေသလား
အိမ်သာအနံ့အသက် ကောင်းမွန်စေမည့် နည်းလမ်းများ